के तपाईलाई थाहा छ पहिलो मानव को होला ? – Ujyaalo Patrika
के तपाईलाई थाहा छ पहिलो मानव को होला ?
अहिले संसारमा ७ अर्व ८० करोड भन्दा बढी मानिस छन् । यो संसारमा जति पनि मानिस छन् उनीहरुले अन्य मानिसबाटै जन्म लिएका हुन् ।तपाईंले कहिल्यै यो संसारमा पहिलो पटक को जन्मिएको थियो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु भएको छ ?
यो प्रश्न सबैका लागि जटिल प्रश्न हो । आज हामी तपाईंलाई यो प्रश्नको जिज्ञासा मेट्ने प्रयास गर्दैछौं । विभिन्न ग्रन्थमा उल्लेख भएअनुसार, यो संसारमा पहिलोपटक व्रह्माजीले स्वायंभुव मनुको उत्पत्ति गरेका थिए ।
यो प्रमाण पुराणहरुमा पनि पाइन्छ । यो कुरा त हामीलाई थाहा भयो कि धर्तीमा पहिलोपटक व्रह्माजीले स्वायंभुव मनुलाई उत्पत्ति गरेका थिए ।स्वायंभुव मनुकी श्रीमती शतरुपा थिइन् । स्वायंभुव मनुलाई व्रह्माले माटोबाट उत्पत्ति गरेका थिए । स्वायंभुव मनुकै कुलमा पछि गएर ७ मनु भएका थिए ।
महाभारतमा ८ मनुहरुको उल्लेख गरिएको छ तर श्वेतवराह कल्पमा १४ मनुको उल्लेछ छ । स्वायंभुव मनु र शतरुपाका पाँच सन्तान थिए ।त्यसमा दुई छोरा, प्रियव्रत र उत्तानपाद तथा तीन छोरी आकूति, देवहूति र प्रसूति थिए ।एजेन्सीको सहयोगमा
Previous पर्समा भूलेर पनि नराख्नुहोस यी ७ सामान, भइन्छ कङ्गाल
Next शास्त्रअनुसार शनिवारका दिन यी कुरा खानु हुँदैन